Margarekha ‘रिक्सा चालक भन्छन् अब परिवार भोकै मर्छ’ – Margarekha
‘रिक्सा चालक भन्छन् अब परिवार भोकै मर्छ’
आकांक्षा सोनी बाँके/ कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ४ का दिप बहादुर खत्रीले आफ्नो तीनपाङ्ग्रे इरिक्सा नचलाएको दुई महिना भयो । इरिक्सा चलाएर ७ जना परिवारको पेट पाल्दै आएका खत्रीको परिवारलाई लामो समयको बन्दाबन्दीले अहिले बिहानबेलुकाको हातमुख जोर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥र्याएको छ ।
भाडाको घरमा बसेर रिक्सा चलाउने पेशा अंँगाल्नेका खत्रीसँग आम्दानीको कुनै स्रोत नभएपछि थप समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
बन्दाबन्दीका कारण इरिक्सा चलाएर आफ्नो दिनचर्या चलाउने सो दम्पती प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन । उनी जस्तै करिब १० हजार परिवारको दैनिक जीवन इरिक्साको कमाइले धानेको छ । बाँके जिल्लामा झण्डै १० हजार इरिक्सा सञ्चालनमा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर बताउछिन् । लामो समयको बन्दाबन्दीले अहिले यिनै रिक्सा चालकको दैनिक कमाइ गुमेको छ । आम्दानीको वैकल्पिक व्यवस्था भएका केही रिक्सा चालकलाई परिवार पाल्न ठूलै समस्या नपरे पनि रिक्सा चलाएरै बिहानबेलुकाको हातमुख जोर्ने रिक्सा चालकका परिवारलाई भने लामो समयको बन्दाबन्दीले पेटमाा भोक र मानसिक तनाव दिएको छ ।
उता स्थानिय तहले पनी घर भएका र विदेश गएका, केही रोजगार भएकालाई राहत वितरण गरेको छैन् ।तर लामो समयदेखी भएको लकडाउनका कारण बिपन्न असाय परिवार मात्र नभई सामान्य पेशा व्यवसाय गर्दै आइरहेका परिवारलाई समेत प्रभावित बन्न पुगेका छन् । झण्डै दुई महिनासम्म घरमै लकडाउनको पालना गरेर बसेका यहाँका केही रिक्सा चालक अहिले सडकमा रिक्सा लिएर निस्कन थालेका छन् । उनीहरुको यस्तो प्रयासले भने निरन्तरता पाउन सकेको छैन । स्थानीय प्रशासनले कडाइ गरेका दिन घर फिर्ता जानुको उनीहरुसंँग अरु कुनै विकल्प रहँदैन । ‘अलिअलि जोगाएको पैसा पनि सकियो, साथीभाइ, आफन्तसंँग ऋण लिएको रकम पनि भ्याइसकियो । रिक्सा नचलाए अब त हाम्रो परिवार भोकभोकै मर्छ’, बन्दाबन्दीमा रिक्सा चलाउने भनेर निस्कनेका सुर्खेत घर भई कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने दिपक वि.क.ले बताए । यकातर्फ बैँकबाट ऋण लिएर इरिक्सा चालकहरुले आफ्नो दैनिक चलाएका थिए भने दैनिक कमाएको पैसा किस्ता तिर्ने बचेको पैसाले घर खर्च गर्दै आएका थिए । कोरोना भाइरसका कारण अहिले समयमा किस्ता व्याज बुझाउन त परैको कुरा बिहान बेलुका छाक टार्न समेत मुस्किल परिरहेको छ ।
२० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १२:५७ प्रकाशित